Mukati memazuva mashoma ekutanga, OPPO yatanga kuburitsa nyowani nyowani yeiyo nyowani mureza. Iyo Tsvaga X3 Pro iri kugamuchira iyo inogadziridza iyo inounza inoenderana inozorodza mwero wepakati pakati pe1Hz ne120Hz. Zvinotaridza zvakafanana nezvine OnePlus zvakaziviswa kupa neOnePlus 9 Pro. OPPO inoti iyo smartphone yayo yakagadzirirwa kuziva kuti ndeipi app irikumhanya pane ino sisitimu kuti iwirirane nechiratidziro chekuvandudza zororo. Ipo Xiaomi neSamsung zvakare ichipa inoenderana neyakagadziriswa mwero pamireza yavo, hapana anogona kuenda zvakaderera se1Hz.
Ikozvino kuvandudza kunobva Weibo uko OPPO zvakaziviswa iyo nyowani nyowani. Yakati iyo nyowani inogadziriswa yekuvandudza mwero yekuvandudza pane Tsvaga X3 Pro yakanangana nekuderedza kushandiswa kwesimba ne50 muzana. Chinhu chitsva ichi chinobvumira foni kuti igadzirise mwero wekuzorodza zvinoenderana nemaapps ari kushandiswa parunhare kuti ape mhedzisiro yakagadziriswa.
Semuenzaniso, kana iwe uchiona bhaisikopo, mwero wekuzorodza unenge uri pakati pe24Hz ne60Hz. Kana iwe uchipeta, iyo skrini ichafamba pa120Hz Zvisinei, kana iwe uri kushandisa e-kuverenga app kana kutarisa kune mamwe ako mafoto iyo Tsvaga X3 Pro yekuvandudza mwero inodonhedza pasi ku1Hz. Iyo inononoka mwero wekuzorodza, iwo mashoma simba iwo ekuratidzira anoshandisa.
Kune rumwe rutivi, the OnePlus 9 Pro ichatsigirawo inoenderana neyekuvandudza mwero iyo inobvumidza iyo skrini kuti iende zvakaderera se1Hz. OnePlus irikudana fomu yayo nyowani yeOLED kuratidza "Fluid Ratidza 2.0." Chichava mubatanidzwa wepaneru reOLED reSamsung uye boka reasarudzika OnePlus software optimizations uye tunings. Iyo yakaderera zororo mwero inobvumidza OnePlus 9 Pro kushandisa mashoma simba kana iyo skrini yakagara isina basa. Iyo Tsvaga X3 Pro yekuvandudza mwero inoita kunge inoshanda nenzira imwechete.
The post OPPO Tsvaga X3 Pro inowana inoenderana yekuvandudza mwero we1Hz-120Hz ine yekuvandudza yakatanga kutanga pocketnow.
Samsung's Note20 Ultra Variable Refresh Rate Ratidza Kutsanangurwa